Apple Music inoshandura nzira yainoratidza nayo katarogu yemufananidzo | Ndinobva mac
Apple Music inoshandura nzira yainoratidza nayo katalog katuni
Kana uchitsvaga ruzivo, maalbham nezvimwe pamusoro pevatinoda maartist muApple Music, basa racho rinogona kuzonetsa, kunyanya kana muimbi kana boka riri kubvunzwa achangoriwana, nekuti hapana nzira yekuziva, semuenzaniso, izvo iro razvino basa nekukurumidza uye nyore.
Neraki, ivo vakomana vanobva kuCupertino vakaziva mhirizhonga iyi, uye vatanga kushanda kuyedza kuigadzirisa. Apple yakarongazve iyo muunganidzwa wevanyori uripo pane yayo yekumhanyisa mimhanzi chikuva, ichipa yakanyanya kunzwisisika odhi uye yakafanana chaizvo neiyo isu tagara tichikwanisa kuwana mumakwikwi ayo makuru, Apple Music.
Kubva payakatangwa, vashandisi vazhinji vakaratidza kusagadzikana kwavo nezve kuomarara kunoratidzwa nemamenu, kuomarara kwakadzikiswa gore rega rega, nekuda kweshanduko mune inoonekwa nekambani. Kubva ikozvino zvichienda mberi, maalbhamu e studio ane yavo chikamu uye anogara achiratidzwa kutanga, kuratidza kukosha kwavanako mukati mekatalogi yemuimbi Tevere, isu tinogona kuwana maSingles, EPs, mhenyu maalbhamu uye makomputa. Zvichienderana nemufananidzo, isu tinogona zvakare kuwana iyo Yakakosha maAlbums chikamu.
Sezvo isu takakuzivisa iwe mazuva mashoma apfuura, Apple yekumhanyisa mimhanzi sevhisi yakawedzera zvinopfuura 116 matsva eTop 100 matsva paApple Music, zvinyorwa zvinotibvumidza kuti tikurumidze kuziva kuti ndedzipi nziyo dzinoteererwa zvakanyanya munyika dzese umo Apple Music inowanikwa. Aya mazita anovandudzwa zuva rega rega, saka iri sarudzo yakanakisa yekutarisa kana tichida kuziva yekutanga-ruoko, ndidzo nziyo dzinonyanya kurira mune dzimwe nyika, kusanganisira yedu zviri pachena, uye nekudaro kukwanisa kuwana pfungwa ye mimhanzi inonakidza yechimiro chakatarwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple Music inoshandura nzira yainoratidza nayo katalog katuni
Wedzera zvinyorwa kumifananidzo yako neFontography, inowanikwa chete 1 euro